/Blog/Ukuhla ukusinda/I-10 ephezulu yehlabathi yokuthengiswa komzimba
ezaposwa ngomhla 09 / 01 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ukuhla ukusinda. Ibe 58 Comments.
Ukuhla ukusinda Imbali Yezobisi
Isisindo sokulahlekelwa kwezidakamizwa
Ezi zi yobisi zibandakanya isakhiwo samachiza esifanayo ne-NA kwaye sinako; ngenxa yoko zibophelela kwiimceivers ezifanayo njenge-noradrenaline.
Isakhiwo seMichiza se-sympathomimetic agents.
Amachiza abuye aphucule umsebenzi we-noradrenaline "kwisiko lokuncedisa" kwengqondo yomntu, i-hypothalamus. I-hypothalamus yomntu ilawula ukulinganisela kwamandla kwindlela yomzimba. Ulwazi malunga nezitolo zamandla ngamnye luhlanganiswa kwi-hypothalamus elawula ukutya kunye nesondlo. Ukubopha iNoradrenaline kunye nomsebenzi kwi-hypothalamus inefuthe lokunciphisa ukutya. Ezi zi yobisi ziquka:
① I-Sibutramine HCL (iMeridia) I-CAS: 84485-00-7
② I-Lorcaserin HCL (iBelviq) I-CAS: 1431697-94-7
④ I-DNP CAS: 119-26-6
Ukutshiswa kwezidakamizwa zokutshisa ukunyusa umzimba kunokuncedisa Ukulahlekelwa ngamatye ngokunciphisa iinqweno, ukuphucula umthambo, nokugcina ukutya okunomsoco. Zingakwandisa nokukwazi ukuqhuba umsebenzi ngokukhuthaza amandla kunye nokugxila. Ezi zi yobisi ziquka:
1. I-Synephrine CAS: 94-07-5
2. I-DMAA / 1,3-Dimethylpentylamine CAS: 13803-74-2
3. I-Clenbuterol HCL CAS: 21898-19-1
4. I-Salbutamol (i-Albuterol) I-CAS: 18559-94-9
① I-Orlistat CAS: 96829-58-2
② I-CAS Ceististat: 282526-98-1
Ukunyusa ukulahlekelwa ngcaciso yeziyobisi
Ngaphantsi kweenkcazo ezimfutshane kodwa zichazwe kuzo zonke iziyobisi ezikhankanywe ngasentla.
I-Sibutramine i-HCL yenye yezona zinto zifunwa kakhulu. Iphakamisa zombini i-serotonin kunye ne-NA kumbindi, emva koko zibophelela kwi-receptors yazo ukulawula ukukhathazeka nokutya.
I-Sibutramine unyango kunye nokutya kunye nokuzivocavoca kunokubangela i-4.6 kg ukulahlekelwa kwesisindo ngaphezu kwesenzo nokutya kuphela. Ngokunciphisa ukunciphisa ukutya, sibutramine sele ifunyenwe:
• Ukukhulisa i-thermogenesis
• Ukuphucula iimeko zomngcipheko we-cardiovascular
• Ukwandisa ukukhuluphala kwamanzi
• Ukwandisa i-blood glucose kwizigulane eziphila nesifo sikashukela se-comorbid
• Ukuphucula iipiliti
• Ukwandisa amanqanaba e-C-peptide, i-insulini kunye ne-uric acid
Isakhiwo seKhemikhali yeSibutramine HCL
Isakhiwo seKhemikhali seLorcaserin HCL (iBelviq)
Imisebenzi yezidakamizwa i-Lorcaserin HCl ukulawula isantabolism nesidlo. Isilwanyana savunywa yi-FDA ngonyaka we-2012 kubantu abane-BMI ye-30, kunye nezigulane ezine-Index Mass Mass ye-27 okanye abaninzi abane-cholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi, kunye nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela. Isilwayo sisebenza kwakhona ukuphucula i-serotonin 2CV receptor ebuchosheni bomntu obungabancedisa izigulane ukuba zizive zizele emva kokuthatha ngaphantsi.
Kwizilingo zonyango, i-38% yabantu abadala (ngaphandle kohlobo lwe-2 isifo sikashukela) lahlekelwa ngaphezu kwe-5% yesisindo somzimba, xa kuthelekiswa ne-16% yabantu abadala baphathwa nge-placebo.
③ I-Rimonabant HCL CAS: 158681-13-1
Isakhiwo seKhemikhali seRimonabant HCL
Isidakamizwa se-Rimonabant HCL simbulelo ngokucacileyo kwimoya yayo yesenzo njengendlela ekhethekileyo yokukhetha isifo senwaba-1 (CB-1). I-Endocannabinoids ikhutshwe kwi-CNS kwaye ivuselela i-lipogenesis, isondlo, kunye nokuqokelela kwamafutha kwipheriphery. Imisebenzi ye-Rimonabant HCL yokuvimba i-endocannabinoids.
Isilwanyana sithatha ngokukhawuleza emva kokulawulwa komlomo. Ukuphumelela kwesi sigulo ukunyanga izigulane ezithinteleyo okanye ezigqithiseleyo zifunyenwe kwinkqubo yezilingo ezine ezilawulwayo, ezilandelwayo, ezibizwa ngokuba yiRIO (Rimonabant in Obesity). Kule mvavanyo, le nkunkuma ifumaneke ukuba iphumelele njenge-orlistat ne-sibutramine.
I-2,4-Dinitrophenol (i-DNP okanye i-2,4-DNP o) yikhemikhali yendalo kunye nale fom kunye nesakhiwo seekhemikhali: HOC6H3 (NO2) 2.
Imisebenzi ye-DNP njengeprotonophore, ukuvumela iiproton ukuvuza kwi-membrane yangaphakathi kunye ne-ATP synthase. Oku kuya kwenza ukuba i-ATP yokusebenza kwamandla ingasebenzi kakuhle. Ngenxa yoko, ezinye zamandla eziveliswa ekuphefumulweni zichitheka ngendlela yokushisa.
Ukungazi kakuhle kuhambelana ngokuthe ngqo kwidayithwa yesilwanyana esithathiweyo. Njengoko umthamo wezonyango ukwanda, ukuveliswa kwamandla kuya kuba yinto engasebenzi kakuhle, ukuphakanyiswa kwezinga lokunciphisa umzimba (kunye nesantya esiphezulu seoli) kutshatyalaliswa iimfuno zamandla kunye nokuhlawulela ukungasebenzi. I-DNP ingenye ye-arhente engcono kakhulu eyaziwa ngokuxuba i-phosphorylation ene-oxidative. I-Phosphorylation ye-ADP yi-ATP synthase ithola "i-uncoupled or disconnected from oxidation.
(2) Indlela yokuHlangana kwamafutha
① I-Synephrine CAS: 94-07-5
I-p-synephrine i-Compound i-alkaloid. Oku kuthetha ukuba yinkomfa yezinto eziphilayo ezinokufumaneka kwindalo kodwa eziphantsi. I-compound ine-nitrogen njengesiseko.
Isakhiwo seMichiza se-synephrine
I-caffeine, i-nicotine kunye ne-morphine nayo ikwaseklasini yama-alkaloids ngokutsho kwabaphandi. I-Synephrine ibonakala ngokubonakalayo kwizondlo zokutya zokulawula ubunzima okanye ukulahleka kunye nokusebenza kwezemidlalo.
USynephrine usebenza njani kumzimba wethu?
Iikhemikhali kwi-p-synephrine zithintela inkqubo ye-nervous by stimulating β3 adrenergic receptors ezenza indima ebalulekileyo kwi-thermogenesis ne-lipolysis ngamafutha omdaka. Oku kuthetha ukuba ezi zifunyenwe ziyakwenza ukuba inkqubo yakho iqhumisele i-fat for energy.
③ I-DMAA / 1,3-Dimethylpentylamine CAS: 13803-74-2
I-Dimethylamylamine yilezi zixhobo ezenziwe ngokukodwa kwilebhu. I-1,3-dimethylamylamine (i-DMAA) isiphumo se-amphetamine esisetyenziselwa kakhulu kwiimveliso ezithengiswa kwi-US. Ngamhla, i-dimethylamylamine ithengiswa njengesichengiso sokusetyenziswa kwemfuyo esetyenziselwa ukulahleka kwesisindo, i-ADHD (ingqalelo yokulahleka kwesifo esiyingozi), ukwakha umzimba, nokuphucula ukusebenza.
④ I-Clenbuterol HCL CAS: 21898-19-1
I-Clenbuterol, Eyaziwa nangokuthi yiClen, i-decongestant ne-bronchodilator. Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ukukhusela ukuhlaselwa kwe-asthma. Le ngxube efana ne-steroid, kodwa ayikho i-steroid yangempela. Iwela kwicandelo lama-agonists β2.
I-Clenbuterol inokuqalisa izimpendulo zomzimba ezifana ne-adrenaline. Yenza i-beta-2 receptor subtypes isebenze kwinkqubo ye-adrenergic. Oku kubangela ukunyuka kwekampu (i-ATP eyimfuneko efunekayo kwi-cross-talk talk). Ngenxa yoko, iprotheni kinase A iyanda. Iprotheni kinase A yi-enzyme elawula ipilid, glycogen, kunye nomsebenzi we-sugarabetism. Ukunyuka kwalo kukhuthaza umbane ovuthayo kumzimba. Iphakamisa ezinye iindlela eziza kuncedisa ekutyeni okutyelayo ngeprogram yezinto eziphilayo ezibizwa ngokuba yi-fatty acid oxidation.
Amafutha atshiswayo asetyenziswa njengomthombo wamandla okwenza imisebenzi yomzimba. Ikhuthaza i-mitochondria ukukhulula i-ATPs, ekhokelela ekunyuseni kwinqanaba lomlinganiselo. Kukwaziwa ngokubanzi ukuba ukwanda kwinqanaba le-metabolism kunceda ekulahlekeni kwesisindo.
⑤ I-Salbutamol (i-Albuterol) I-CAS: 18559-94-9
isakhiwo samakhemikhali saseSalbutamol (iAlbentuterol)
I-Salbutamol yipilisi ephethe isifo esingapheliyo sesifo se-pulmary and asthma kunye nezinye izifo ezinxulumene neCOPD. Imodi yezenzo zamachiza ivula okanye ihlaziye imiphepha ephefumlayo yamaphaphu ngexesha lokuhlaselwa kwe-asthma. Ekubeni i-Salbutamol inefuthe elikhuthazayo, abanye abantu basebenzisa lesi sigqirha se-asthma ukunyusa amafutha okanye ukulahleka kwesisindo.
I-Albuterol ilungele ukusetyenziswa kwenkqubo yokulahlekelwa kwesisindo kuba ineempembelelo ezifanayo kwi-androgenic inkqubo efana nokuzivocavoca umzimba. Yakha ubuninzi beemisipha kwaye iyanciphise ubunzima bonke.
Isetyenzisiwe ngabakhi bezakhiwo ukuze banqunyulwe amanqatha amaninzi kwiindawo zomzimba wabo onokuba nzima ukulawula okanye ukulahlekelwa ngamafutha ngezinye iindlela. Xa uthabatha le nkunkuma yokwakha umzimba kunye nemisebenzi yokulahleka kwemithwalo, idlalwa rhoqo kwipilisi okanye kwifom yefayili. Nangona ungasebenzisa i-Salbutamol inhaler ubunzima okanye Ukulahlekelwa ngamatye ukuba ngaba kuphela okukhethwa kukho.
• Unesiphumo esihle kwixinzelelo legazi;
• Ukunciphisa ukuchithwa kwe-cholesterol kwaye ngoko amazinga e-cholesterol (kunye ne-LDL cholesterol);
• Ukwandisa ukuxhatshazwa kwe-insulin; kwaye
• Ukwandisa ulawulo lwe-glycemic.
Kuye kucatshulwa ngokubanzi ukuba i-orlistat yomdla wesisu esisemngciphekweni isenza ngendlela efanayo ekuqiniseni ukunganyaniseki, okukhuthaza abo bala mayeza ukuba banamathele ngokuthe ngqo kwidlo ephantsi.
I-Cetilistat inomlomo osebenzayo, inoveli, i-pancreatic kunye nesisu esiswini se-lipase.
I-Cetilistat ukulahlekelwa kwesisindo semfuyo yilezi zixhobo ezenziwe ukuphatha ukukhuluphala. Isebenza ngendlela efana neziyobisi ezixutywe ngaphambili ezaziwa ngokuba yi-Xenical (orlistat) ngokulawula i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwezi nzyzy, i-triglycerides ekudleni kwethu inqandwa ukuba igalelwe kwi-fatty acid acids engabonakaliswa kwaye isuswe emzimbeni ongagqithwanga.
Isisishwankathelo sokulahlekelwa kwesisindo
Emva kokuchitha iiyure ezininzi kuphando malunga nokulahlekelwa kwesisindo, sakwazi ukuchonga ii-2018 zehlabathi eziLungileyo zokuThengisa ukuPhepha kwesisindo. Ezi zincinci zokulahlekelwa kwezilwanyana ziquka i-orlistat weight loss loss powder kunye ne-lorcaserin yokulahlekelwa kwesisindo. Ngokungafani nokupakisha kokuncipha kwesisindo esifumaneka kuyo nayiphi na ivenkile yezidakamizwa, la mayeza alahlekelwa yimizimba enqunywe ngabaqeqeshi bezonyango baye bahamba iminyaka yokuvavanya ukuba bafumane isitampu semvume evela kwi-FDA kunye nezinye izikhundla. Sincoma kakhulu ukuba uzame ezi zi yobisi kuba ziye zafakazelwa ukuba azisebenzi kuphela kodwa zikhuselekile ukusebenzisa.
I-58 Impendulo Amazwana
Mog Arten09 / 21 / 2018 kwi-4: 11 ntambama
Ndiyathanda ukuba kukho amayeza ahlukeneyo ukutshisa ioli kunye nokutya. Ukwenza ukusetyenziswa kwabasebenzisi base-insulin kunye nokulawulwa kwe-glycemic kunamandla kakhulu kukuguqula umzimba. Ndifuna ukwazi ukuba ngaba izigulana kufuneka zixhomekeke kwaye zihlale kwezi zi yobisi. Ndingathanda ukubona isifundo kwixesha elide.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 kwi-4: 02 ntambama
Uvakala ngathi ukuxhaswa kwesisindo ukuqhubeka nokuphucula nokutshintsha ixesha. Ndiya kuba nomdla ukuba kukho naziphi na iimfuno zokukhusela ngokuxuba naziphi na iziyobisi ezikhankanywe kwiindidi ezahlukeneyo. Ndiyabulela ukwabelana kweli nqaku.
imah09 / 21 / 2018 kwi-10: 38
I-2018 ekuthengiseni ubunzima bokunciphisa ukunyuka kwesisindo nokuvavanywa. Ndicinga ukuba abantu abayifunayo ngokwenene, bafanele bazame. Ndiqinisekile ukuba kuya kusebenza njengomlingo.
wumi09 / 21 / 2018 kwi-10: 30
Kukho ubuninzi bokulahlekelwa ubunzima bokuthengisela abathengisi kwimarike. Ukunyaniseka, ndathetha ngento eninzi ngaphambili kwaye i-AASraw ibalulekile ukwakha intsebenziswano, ndicinga ukuba.
Diane Maxwell09 / 21 / 2018 kwi-9: 05
Ngoku, olu luhlu lukhulu kakhulu. Ndicinga ukuba ngoku ndiyazi ukuba luphi uhlobo lokunciphisa ukulahleka kwamandla ndiyidingayo. Andizange ndiyazi nokuba kukho iintlobo ezahlukeneyo ngokwemisebenzi / injongo. Enkosi.
UCaroline Warner09 / 21 / 2018 kwi-8: 58
Andizange ndikholelwe ngokwenene "kwimilingo" emva kokunciphisa umzimba. Kodwa oko kwatshintsha xa ndizama u-orlistat! Ndicinga ukuba yileyona nto ilungileyo kuloluhlu.
admin, admin09 / 21 / 2018 kwi-3: 26
Sawubona Hello, ungathumela iimfuno zakho kwi-imeyile yethu ekucaphukisayo (king@aasraw.com) ukuba ufuna nayiphi na ilahleko yokuthoba ubunzima. Ngugqirha okanye ngaphezulu kwekhawuntala, kuxhomekeke. Ndiza kuzama konke okusemandleni am ukukunceda ukuba uthathe kodwa kungcono ukucela ugqirha wakho malunga neengcebiso zobungcali.
admin, admin09 / 21 / 2018 kwi-3: 14
Ewe, Abathengi bethu baninzi banelungelo lokulahlekelwa ngumzimba wokulahleka kwesisindo. Ngokubhekisele kwiinkxalabo zempilo, kuxhomekeka, zonke iziyobisi zinemiphumo emibi. Ngoko ke kufuneka ukuba uthathe umlinganiselo ngokuchanekileyo phantsi kweengcebiso zamagqirha.
UStephanie Kamau09 / 21 / 2018 kwi-12: 02
Kukho amaninzi amaninzi okulahlekelwa ngumzimba kwiimarike kwaye ukufumana othembekileyo osebenzayo ngumngeni omkhulu. Ndiyazi abantu abaye bazama phantse zonke iindleko zokulahlekelwa kwesisindo ngaphandle kweenguqulelo. Ndiyicinga ukuba kusebenze ngaphandle kufuneka kube yindlela yokuqala yokulahlekelwa yintlaka ngokwemfuyo phambi kokuthatha nayiphi na imithi.
UCaptain U09 / 20 / 2018 kwi-10: 28 ntambama
Ndiyakuthatha oku nje ngokuba ndifuna ukuphuma ekubanjeni. Ndingafuneka ndihlambulule inkqubo yam kunye nokunciphisa ukunyakaza kwamathumbu kunokukwenza inkohliso.
Mach09 / 20 / 2018 kwi-9: 25 ntambama
Ukulahlekelwa kwesisindo kuye kube ngumcimbi wonke umntu ufuna ukubukeka kakuhle. Ndivakalelwa ngathi le mizila ayiyi kuze ihambe. Ukuqwalasela imithombo yeendaba iye yabangela ukuba loo myalezo ukhangele kakuhle ngexesha lonke. Ngoko ndicinga ukuba kufuneka ndisebenzise ukulahlekelwa kwesisindo somzimba okanye iipilisi zokulahlekelwa kweoli ukwenzela ukuba wenze ngcono
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 kwi-3: 45 ntambama
I-Clenbuterol ne-Salbutamol isandi esiphumelele ngakumbi ekuphatheni ukunyamezeka nokuphucula imisebenzi yomzimba. Ngokubanzi, izongezelelo ezifana nalezi zibonakala zisebenza kakuhle kwaye ziguqulela ekudaleni impilo enempilo.
I-Curt Rancher09 / 20 / 2018 kwi-3: 40 ntambama
Ndingathanda ukulungeleka njengoko lo mfazi uphakamileyo! Ndiyathanda ukuba le ncediso ibhaliwe ngabaqeqeshi bezonyango abangakwazi ukufakazela ukuphakama kwayo. Ukufunyaniswa nezigulane ezigqithisileyo kwakumangalisa kakhulu. Enkoso ngokwabelana!
Bianca Lively09 / 20 / 2018 kwi-5: 56
Andizange ndiyazi ukuba ukulahlekelwa kwesisindo sinezigaba ezahlukeneyo. Ndacinga ukuba bonke babetshisa amafutha angafunekiyo! Enkoso ngokwabelana!
Barney Winchester09 / 20 / 2018 kwi-5: 54
Wow, ukulahleka kwesisindo kubuyela kwi-1800s? Andinayo ingcamango malunga naziphi na izongezelelo kwaye ndizama ukunciphisa umzimba, ngoko ke ndiyabonga ngale nqaku efundisayo!
UNora09 / 20 / 2018 kwi-4: 49
Siyabulela olu luhlu! Izinto ezininzi ezitsha zophando malunga nendlela yokukrazula i-fatly fat and how to lose fat, etc.
Nikki09 / 20 / 2018 kwi-2: 12
Ndiyincoma ukusetyenziswa kwazo zonke ezi zintlawulo zokulahlekelwa kwintlawulo ephezulu ngenxa yokuba sele idlule iminyaka yokuvavanya kwaye iqinisekisiwe kwaye iyasebenza. Lezo zilahleko zokulahleka komzimba zingabakho umzimba wakho wokushisa, ukutya okunomsoco wokulahleka kwesisindo, mna ndikhetha le ndlela ukulahlekelwa ngamanqatha. Sinokuyithemba ukuba isebenze.
ibhola09 / 20 / 2018 kwi-2: 04
I-Certilistat yenye eyongezelelekileyo yokuncedisa ukuba ama-fat fighters kufuneka asebenzise. Ndicinga ukuba kuya kuba yinto enhle ngexesha elide xa iinqatha zomzimba zithathwa ngokulula.
fanny09 / 19 / 2018 kwi-10: 47 ntambama
Ndiya kucebisa iLorsearin kwabo banexinzelelo lwegazi kwaye ilungile kakhulu kubadli abakhulu. Iya kunceda ukunciphisa ukuthanda ukutya kunye nokukhawulezisa imetabolism.
uthanda09 / 19 / 2018 kwi-10: 37 ntambama
I-Olistat iya kuba yinto enhle kum, ithengiswa kwimarike njengento yokudla ipilisi. Ndimele ndizame oko. Kuba kuya kukunceda ukunqumla amanqatha ekudleni. Ndiya kukhetha ukugaya ukunyusa ukutsha.
Sidney Moreno09 / 19 / 2018 kwi-9: 53 ntambama
I-Orlistat izandile njengenye indlela ebaluleke kakhulu yokulahlekelwa ubunzima, andikaze ndive ngelo hlobo lonyango kodwa ndicinga ukuba luncedo kakhulu kwaye luya kunceda abantu abaninzi, kudibaniswa nokuzivocavoca kunye nemikhuba yokutya enempilo.
Kurt09 / 19 / 2018 kwi-9: 21 ntambama
Ngaba umntu unokusebenzisa loo mithi yokulahlekelwa kwesisindo? Ndiyathetha ukuba kukho naziphi iinkxalabo zempilo endingaziqwalasela kuqala? Ndicinga ukuba ulwazi lubalulekile apha, kodwa, iposi enhle ngokubanzi.
Kitty Pryde09 / 19 / 2018 kwi-8: 53 ntambama
Ngaba le nto ikhona yonke indawo ngoku? Imvume okanye ngaphezulu kwekharityhulam? Ndi nqwenela ukuba sibe nolwazi oluneenkcukacha apha. Nangona kunjalo, ubuncinane amayeza eyeza alapha.
Chatton09 / 19 / 2018 kwi-8: 34 ntambama
Andinayo into yokuba ukulahlekelwa kwesisindo se powder kuyinto enamandla. Ndicinga ukuba usadinga ukuzivocavoca rhoqo xa uthatha ezo zongezelelo. Sekunjalo, ndandithanda ukufunda le blog!
Rae09 / 19 / 2018 kwi-8: 28 ntambama
Ndiyakhathalela kakhulu indlela yokulahlekelwa ngokukhawuleza kwintlungu ye-belly. Ezinye iimveliso endiyaziyo ziyi-sketchy ngoko ndifunda iilebula. Ndiyabonga ngenqaku elifundisayo! Oko kunceda ndincede ndiyazi indlela yokulahlekelwa ngumzimba ngokukhawuleza
Burrows ye-Landen09 / 19 / 2018 kwi-3: 17 ntambama
Izixhobo zeCetilistat kunye neClenbuterol ziyathakazelisa indlela ezichaphazela ngayo ukuhamba komzimba. I-Cetilistat, ilungileyo inkqubo yokugaya umzimba, i-clen inokukunceda umzimba wakho ucoce. Ndabona izigulane zicela ukulahlekelwa kwelahleko, ngenxa yokuba kukho izifundo ezivandlakanyweyo ezifunyenwe zona.
Mozer Torancher09 / 19 / 2018 kwi-1: 53 ntambama
Ezi zifunyaniso ezifumanekayo! Ukuba nefuthe elihle kwixinzelelo legazi kunye nokukhuthaza ukulawulwa kwe-glycemic yimiphumo ebalulekileyo ekufumaneni kwongezelelo. ukulahleka kwesisindo, izicwangciso zokufunda, izicwangciso zokutya, njl. ezi zihloko ezifudumele kwaye ndiyayithanda, ndicinga ukuba kunceda gqitha ukuba ndiqalise isicwangciso sam yokulahleka kwesisindo. Enkoso ngokwabelana!
Justin Dee09 / 19 / 2018 kwi-10: 41
Andizange ndizame ukuxhaswa kwesisindo somzimba, kwaye andiziboni ndizama ngokuzayo. Ngokuqhelekileyo ndihamba ngokutya okunzulu, yenza ikhalori ukubala kunye nekhalori yecala kwaye usebenze nzima kwi-gym. Ukulahlekelwa kwesisindo, kufumaneke.
Marco Antonio09 / 19 / 2018 kwi-10: 39
Ndiyekile xa ndizama ukunciphisa umzimba, kodwa eli nqaku landinika ngandlela-thile indlela ekusebenziseni ngayo, kwaye njani. Kukho izidakamizwa ezininzi nje apho, ukuba unyanzelekile ngokwenene okusebenza kuwe. Ukubonisana noogqirha mhlawumbi kunokuqala ukuqala.
Charmaine Bush09 / 19 / 2018 kwi-9: 06
Orlistat wasebenza umlingo wayo. Ndiyakholwa ukuba ukulahleka kwesisindo akukho konke malunga neziyobisi kuphela. Sifanele sidibanise nomsebenzi wokwenyama kunye nokutya okunempilo / okunokulinganisela ukuze sibone ngokwenene iziphumo esizifunayo.
UJonathan Gordon09 / 19 / 2018 kwi-9: 03
Hayi, ezi ziyobisi zikhulu kakhulu. Uzama ukulahlekelwa ubunzima kwiminyaka eyi-2 ngoku, kwaye ngoku kude ndibona iziphumo. Mhlawumbi lixesha ndizama ukunyusa iindleko zokunciphisa umzimba.
admin, admin09 / 19 / 2018 kwi-5: 46
Mhlobo wam, ungakhathazeki. Zonke izilwanyana zinemiphumo emibi njengoko siyazi. Kodwa ixhomekeka. Uya kufumana amanzuzo amaninzi kwi-weight loss loss powder xa uthabatha ngokuchanekileyo kwaye kuya kulungelelaniswa nezemidlalo. Abanye abathengi baye bayala i-sibutramine powder kunye ne-lorcaserin powder kuthi, bathi bayasebenza kakuhle kwaye bayayithanda kakhulu.
admin, admin09 / 19 / 2018 kwi-5: 37
Siyabonga ukuhlolwa kwakho. Zonke iziyobisi zinemiphumo emibi. Kuyaxhomekeka. Kodwa ndicinga ukuba i-lorcaserin powder kunye ne-orlistat powder iya kuba yimibono emihle kuwe ngokuphathelele kumava ethu kumakhasimende. Ngokukodwa i-lorcaserin, kuye kwabikwa ngu-BBC kungekudala kwaye kunemiphumo engaphantsi.https://www.bbc.com/news/health-45319393
Easter09 / 19 / 2018 kwi-3: 21
Andiqondi ukuba kuya kubakho into eyenzakalisayo malunga nokuthatha naluphi na ukongezwa kokuncipha kobunzima kuba igqityiwe i-FDA neJapan. Zonke ezi zinto zongeziweyo mazisetyenziselwe ukunciphisa umzimba, kuba baphulukana namafutha ngokukhawuleza. Isicwangciso sokutya esinciphisa umzimba, unokutshisa amanqatha ngokukhawuleza.
Autus09 / 19 / 2018 kwi-3: 11
Kwakulungile ukuba ubonise ixabiso elincinci lokunciphisa umzimba. Ndiyifunde imibuzo efana nale ngxaki yokulahlekelwa iiforam kwaye iimpendulo ezinengqiqo azinikwe. Ndiyathemba abo bafuna le nkcazelo ukuba bayibone.
Lisa Nataliany09 / 19 / 2018 kwi-12: 58
Ndiyathanda ukutya nokusela, ngoko ukulahlekelwa isisindo kuhlala kukukhathazayo. Ukuba le ncediso iyakwazi ukunyamekela umzimba wam ngaphandle kokuya kutya, ngoko kulungile ukuba ndinokuyifumana le nqaku. Enkosi!
UDavid Tjoe09 / 18 / 2018 kwi-10: 21 ntambama
Andizange ndizame ukuxhaswa kwesisindo somzimba, kwaye andiziboni ndizama ngokuzayo. Ngokuqhelekileyo ndihamba ngokutya okunzulu, yenza ikhalori ukubala kunye nekhalori yecala kwaye usebenze nzima kwi-gym. Ukulahlekelwa kwesisindo, kufumaneke. Kodwa abanye abantu abagqithiseleyo ndiyibonile, kunzima kubo ukulahlekelwa isisindo, kuba ukuthembela nje ngokuqina kunye nokulawulwa kweekhalori akukwazi ukufikelela ubunzima abayifunayo. Mhlawumbi iipilisi zokulahlekelwa kwesisindo zingabancedisa.
Alex Summers09 / 18 / 2018 kwi-8: 45 ntambama
Zonke iibhekile zetatye kufuneka zithathe le nkunkuma ngokugqithiseleyo kwaye zibone indlela abangakwazi ngayo ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kwengcinezelo eninzi ngakumbi kulabo abangasebenzi. Yenza isicwangciso sokutya samadoda, ubonise ukuba badle ukutya okunempilo, badle ukutya okunempilo. Ukunciphisa umzimba ngokutya akuyona indlela yokukhawuleza yokulahlekelwa yintlungu
Scott Summers09 / 18 / 2018 kwi-8: 26 ntambama
Kuya kufuneka ndicele ugqirha wam kuqala ukuba ngaba kukhuselekile ukuba ndingakuthatha. Ngaba oku kuyafumaneka ngoku? Ukunyaniseka, ndiyazi kancinci malunga ne-sibutramine kunye ne-orlistat powder evela kumhlobo wam. Ndicinga ukuba kufuneka ndifunde okungakumbi ndiye ndenze into.
Moz Chesk09 / 18 / 2018 kwi-3: 07 ntambama
Ndiyavuya ukuba unokuqinisekisa ukuba ezi zongezelelo zikhuselekile kwaye ziyimpumelelo ukusebenzisa. Ukunciphisa ukutya okunjenge-Sibutramine powder kunye neLorcaserin powder kubonakala kubaluleke kakhulu kwindlela abaphatha ngayo ingqondo nomzimba. Ndiyabona ezi zi yobisi ziba nefuthe elibi kwiindlela zokuphila zabantu kunye nawo wonke uphando olutyala ngabo.
Maury Cheskes09 / 18 / 2018 kwi-3: 00 ntambama
Kukho konke oku kukho konke ukubonakaliswa kwekliniki ekunciphiseni umzimba. Kuyamangalisa ukuba abanye babo basebenza njani njenge-Orlistat kunye ne-Synephrine ngokugaya kunye namafutha atshisayo. Enkoso ngokwabelana!
Kuttan09 / 18 / 2018 kwi-10: 50
izandi ezilungileyo, kodwa ngaba zineziphumo ezixhalabileyo malunga nobunzima kodwa ukhathazeka ngakumbi malunga nesisu kunokunciphisa zonke ezinye izitho zomzimba zichanekile, njenge sibutramine, ndifuna ukuzama kodwa ndikhathazekile ngeziphumo ezibi. Ndincede?
Marc P09 / 18 / 2018 kwi-10: 46
Oku kunokusindisa ubomi, ngokuqinisekileyo ndiya kwenza ukuba intsapho kunye nabahlobo bam bazi oku. Ndiyathetha ukuba simele siqiniseke ukuba nayiphi na into esiyithatha ngayo ukulahlekelwa isisindo somzimba ayiyi kubangela naluphi na umonakalo kwimpilo yethu.
Charlene G09 / 18 / 2018 kwi-10: 43
Ndiye ndathatha iindleko ezininzi kodwa akukho nto yasebenza kum. Kwaye ezinye zazo zenza imiphumo emibi kakhulu. Kuyinto enhle ukuba eli nqaku libonisa ulwazi oluchanekileyo malunga nale ncediso. Ndiyathemba ukuba ndizakuzama ukuzama ukulahlekelwa kwesisindo somzimba kunye nokuphepha iziphumo ezithile. Naluphina isiluleko?
I-Patty Fty09 / 18 / 2018 kwi-9: 37
Ngaba kwiphebhulethi eyenziwe nge powdery orlistat. Ayikwazi ukutya nayiphi na inyama yokutya, ishizi okanye i-KFC! Ndiya kuphelisa iintlanzi zesisu kunye ... uyazi. Hahaha
Amil-lionaire09 / 18 / 2018 kwi-9: 33
I-Orlistat powder inemiphumo emihle ekulahlekeni kwesisindo kwaye ndiyazi umntu olapho.
ufana09 / 18 / 2018 kwi-8: 46
Ndifuna ukuzama i-Lorcaserin HCL powder kuba kuhle kakhulu kwi-metabolism kwaye inokukhusela nokukhusela ukutya. Ukuphelisa ukutya kukusoloko ndiyinkathazo yam enkulu.
Uxolo09 / 18 / 2018 kwi-8: 39
Esi sithuba siyam kuba ndiza kuzama ukulahlekelwa ixesha elide ngoku. Esi sithuba sifike ngexesha elifanelekileyo kuya kufuneka sithathe izixhobo ezongezelelekileyo zokutshisa iioli. Emva koko ndiya kucinga malunga nokulahleka kwamandla omzimba kwindoda kwaye ndizithenge kwixesha elizayo.
carrie09 / 18 / 2018 kwi-5: 17
Ndiyithatha i-laxative ngaphambi kokuba ulahlekelwe isisindo. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba unempembelelo embi kum, ngoko ndiyeka ukuyithatha. Ndiyaxhalaba malunga nokunciphisa umzimba.
laura09 / 18 / 2018 kwi-4: 27
Ndizamile izixhasi ezininzi zokunciphisa umzimba kodwa ngelishwa azisebenzi kum. Enkosi ngeli nqaku lifundisayo. Okwangoku, ndiwuthanda umzimba wam nje unjalo.
AJ09 / 18 / 2018 kwi-1: 40
Ndiyamangaliswa kukuba kukho ubuninzi bexabiso lokulahlekelwa kwindleko ekuphumeni kweemarike. Ndacinga ngokuthatha enye imini ukuze ndizalise indlela yam yokuphila ngoku. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ndifuna imimiselo ekhethekileyo nje ukuba ndize ndiyithenge kunye ne-counter? Okanye ngaba zikhona ezinye iziyobisi endingazifumana ngaphandle kwemfuneko yemigqaliselo?
Pritesh Vishwakarma09 / 18 / 2018 kwi-12: 47
Ukunciphisa ukulahlekelwa ngumgubo kungenakuba kuhle kumntu wonke. Abantu be-allergen kwezinye izondlo ekulahlekeni kwemilinganiselo ye-powders kufuneka bajonge ukuveliswa kwemvelo.
KwiBhunga09 / 17 / 2018 kwi-11: 40 ntambama
Uluhlu olucacileyo lwezinto eziphezulu zehlabathi zokulahlekelwa kwesisindo. Ndiyathanda izongezelelo kuba zihlala zisebenza ngokukodwa xa ukulawulwa kwesikhokelo kunye nokuzilolonga ngokuqhelekileyo kwongezwa ngokunjalo.
Bassy09 / 17 / 2018 kwi-11: 34 ntambama
Le yithuba elikhulu kum, ndihamba kwindleko yokulahlekelwa kwesisindo kwaye ndijamelene nobunzima bam ukususela esikolweni esiphakeme. Uya kufuneka uhlole iSibutramine HCL (Meridia) CAS. kubonakala ngathi kuya kuba oko mna
kuya kufuna ngokwenene.
Vikram Parmar09 / 17 / 2018 kwi-10: 57 ntambama
Kukho izidakamizwa ezininzi ezinceda ekulahlekeleni ubunzima. La machiza asebenza kakhulu.
Jiffy Rando09 / 17 / 2018 kwi-9: 37 ntambama
AmaMedi + kunye nokutya okufanelekileyo isicaka sam ekulahlekeni kwesisindo. Nangona ndayimisa ngoku ukugcina amanqatha amaninzi. Mhlawumbi xa ndibuyela kwisenzo sam ndiya kusebenzisa ezi.
Erza Scarlet09 / 17 / 2018 kwi-9: 23 ntambama
Kufika njani umntu othetha ngeemithi? Ndihlala ndilapha ngecala lomzimba okanye kwicala lezondlo ekudlaleni ngokwemxholo kwesi sihloko kodwa eli lixesha lokuqala eliya kugqitha etafileni. Uncedo mhlawumbi kodwa kodwa. 2
UJanice09 / 17 / 2018 kwi-10: 38
Ndizama ukunciphisa umzimba ukuze ndivuyiswe kukuba ndifumene eli nqaku elibonelela ngolwazi olunzulu malunga nokukhetha isongezelelo sokulahleka kwesisindo esifanelekileyo. Oku kuninika ulwazi oluthe ngqo lwe-non-hype apho ndiyakwenza okulungileyo kum. Enkosi!
I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-2018	I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-Armodafinil